Greek Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(345 mavhoti, avhareji: 4.00 kubva 5)
Loading ...Makumi gumi apfuura aona kuwedzera kukuru kwenhamba yemakasino kuGreek. Sezvazvakaita nezvimwe zvikamu zveindasitiri yekushanya kuGreek, makasino eGreek ari kuita nepainogona napo kukwezva vatambi gore rese uye kwete chete panguva yezororo rakakurumbira rezhizha. Sechikamu chekuyedza uku, iyo Greek kasino yakatevera iyo modhi muLas Vegas. Ivo vanowanzo kuve chikamu cheakakura mahotera / mahotera, vachipa pekugara pekugara, kutandara, zviitiko zvemitambo, zororo rekuratidzira. Kasino Kushambadzira inonyanya kuitirwa vashanyi vekunze, kunyangwe mitambo yemakadhi inozivikanwa kwazvo mutsika dzechiGreek, uye kuGreece kune zviuru zvemakadhi anotamba makirabhu kutenderera nyika asiri makasino.
Rwokutanga ye10 Greek Online Online Casino Sites
Nhasi rwendo rwedu rwemakasino akanakisa muEurope kuenderera mberi munzvimbo yekutandarira pamhenderekedzo yeMediterranean ine nhoroondo yakapfuma. Nyika ino inozivikanwa nemitambo yekutanga yeOlympic, chikafu chisingaenzanisirwe nevazivi vayo. Saka, CasinoToplists yakatumirwa kuGreek!
Greece - jogirafi uye zvishoma nhoroondo;
Mutemo wevashandi vemunharaunda yacho, anenge atoba munhu oga;
International operators hazvibvumirwi kudziviswa pasina reisense.
Vashanu veGreece guta guru reAtene rinotarisana nekero;
Zvinoshamisa pamusoro peGirisi neGirisi.
Kubhejera kuGreece kune nhoroondo yakareba iyo yakatanga kare. MaGreek ekare vaive vatambi vane shungu uye vaitenda mukutanga kwemwari kwemitambo iyi. Semuenzaniso, mungano dzechiGiriki, pane ngano yekuti mushure mekukunda maTitans, Zeus nehama dzake Poseidon naHadhesi vanokanda mijenya kuti vaone kuti ndiani anowana chimwe kana chimwe chikamu chenyika. Zeus akakunda iyo Olympus, Poseidon - gungwa, uye Hadhesi - yepasi. Uku kugoverwa kwemapositi hakuna kukosha zvakanyanya, kunonakidza nekuti simba repasi raitambiswa pachishandiswa mapfupa.
Ngano inonakidza inotsanangura mavambo ekubhejera uye makasino. Pane imwe nguva Tycho, mwarikadzi wemhanza, aifamba mumumvuri wemuminda yeOlympus, umo Zeus (aive mudiki mutambi uye libertine) akamunyengerera. Kubva kumubatanidzwa uyu kwakazvarwa musikana - mwana asina kujairika, chete kuti awane mufaro mukugadzira mitambo dzakasiyana uko mhedzisiro inongotongwa kesi. Akatarisa nemufaro kukakavadzana kwakamuka pakati pevatambi uye akakurudzira vakashungurudzika vakarasika kuzviuraya. Achifadza mwanasikana wake ane hutsinye, chinyararire akamupa dzimba, pachikumbaridzo icho, achikwezva vanopfuura, vakapisa mwenje usingadzime.
Kunze kwengano taura kubhejera uye chaiwo enhoroondo. Nekudaro, mu "Odyssey," Homer anotaurira nyaya yekupopota kwavakaita dhayi, kufadza varwi vechiGreek, kufinhwa kumirira kukombwa kwaTroy. Wezvenhau wechiGreek Plutarch akataura nezvemambokadzi wePezhiya, Parisatis, uyo aifarira mutambo wemadhiza.
Craps yakaunzwa kuGirisi kubva kuAsia uye yaive yakakurumbira pakati penzvimbo dzese dzemagariro. Kune nzvimbo dzakasarudzika - makasino emadzitateguru akagadzirirwa mitambo yakarongeka. Nekudaro, vazhinji vevamiriri vemitemo vechiGreek vanoreva kubhejera vanofinhwa, vachitora rudzi urwu rwevaraidzo sekushora tsika dzeveruzhinji, kuchikanganisa hwaro hwehukama. Chirango chevatambi vasingachinjiki, zvisinei nezvavanogara, vaishanda sevaranda.
Yemazuva ano Greece yakagadzira mamiriro ezvekushanya, zvine chekuita nekubhejera, pamwe nekugadzirisa musika wegemblingovy kuburikidza nezviremera zvine hunyanzvi. Maonero eGreek ekubhejera akaomesesa, mutemo wehurumende wakanangana nekuyedza kudzivirira vanhu kubhejera. Zvinoenderana nemutemo wechiGreek, kutamba kubhejera kunongobvumidzwa mukati mekasino. Mhando dzese dzekubhejera nekubhejera kunze kwemakasino zvakarambidzwa zvachose, kutyora mutemo wemuno kunopa mhosva.
Iyo yekutanga kasino kuGreek yakavambwa mu1928 munzvimbo yeLoutraki, chete ndiyo iriko parizvino inomhanya makasino epamutemo e9 munyika. mashandiro emakasino kuGreek anotonga Kubhejera Commission, iyo yakagadzwa Zvita 20, 2011. Muna Gumiguru 2013 zvakatemwa kukura kwezviitiko zvaro: marezenisi, manejimendi uye kutonga kwenzvimbo dzenzvimbo dzenyika munyika. Komiti iyi inenhengo sere uye sachigaro, anosarudzwa kwenguva yemakore mashanu. Iwo marezinesi ekutanga akaburitswa mu1994, iwo matatu makasino: Casino Mont Parnes, Casino Korfu neCasino Rodos. MuGreek, hapana monopoly: macasino ese mumaoko evashandisi vashoma. Chikuru pane zvese iRegency Casino, iyo inosanganisira iyo Casino Mont Parnes kasino muTesaronika.
Muna 2002, hurumende yeGreek yakapa mutemo unokakavadzana 3037/2002, unorambidza mutambo uyu mumitambo yese yemagetsi munzvimbo dzeruzhinji. Uyu mutemo wakaomarara wakabviswa muna Nyamavhuvhu 2011 chete.Mutemo mutsva uyu unogadza misimboti yemitambo inoyemurika uye unounza izvo zvinodaidzwa kuti "makadhi evatambi" anodiwa kuti vakwanise kubheja zviri pamutemo kuGreece. Kugona kutamba mukasino, maGiriki asvika zera ramakore makumi maviri nerimwe.
Ndeipi, nguva uye chii chingaita muGreek casino?
Parizvino, Greece inoshandisa makasino mapfumbamwe ane marezinesi. Ivo vari pane yakaoma uye zvitsuwa zveGreek zveRhodes, Syros neCorfu. Makasino mazhinji akavhurwa kubva Muvhuro kusvika Svondo uye anoshanda maawa makumi maviri nemana pazuva. Iwo ese akakurumbira mitambo senge roulette, blackjack, vhidhiyo poker, Punto Blanco, Baccarat uye slot michina. Zvakare inowirirana poker makwikwi. Iyo kodhi yekupfeka mumazhinji echiGiriki macasino - akangwara zvisina kujairika, asi usaedze kupinda mukati mumahombekombe.
Casino Loutraki - Greece yekutanga kasino. Iyo inowanikwa eponymous hotera yakaoma munzvimbo yekutandarira yeLoutraki-Agioi Theodoroi. Iyi ndiyo imwe yemasinasi akakura muEurope, ayo zvakare anozvirumbidza spa uye nzvimbo dzemusangano. Uye zvakare, vatambi vanogona kutamba munguva yavo yemahara kuti vanakirwe nekuona kwenzvimbo, senge yeCorint Canal, iyo Ethnographic Museum uye Tembere yaApollo, Korinto.
Aya ndiwo makasino anozivikanwa kwazvo kuGreece iri muguta reTesaloniki, "guta rekuchamhembe" reGreece, uye kubvira 1996. Iri pedyo nendege yeMasedhonia uye iri maminetsi makumi maviri kutyaira kubva kunzvimbo dzakakosha dzeguta. . Imba yekasino inoyemurwa nekushongedzwa kwayo kwakapfuma. Iyo kasino inopa 20 slot michina uye 893 matafura emitambo yebhodhi. Kune zvakare imba yega yega yeiyo High Rollers Club Regency, iyo ine 66 slot michina uye gumi nematafura emitambo yebhodhi.
Rhode Casino inozivikanwa neakasiyana eakavakwa ekare uye dhizaini dhizaini. Iyo inoratidzira zvizere mamiriro ekunze mudhorobha rekare uye iri munzvimbo yehotera yepamusoro Grande Albergo delle Rose boutique hotera. Iyo ine zvese zvekuvaraidza vatambi: slot michina, akawanda poker matafura, roulette nemimwe mitambo. Iyo kasino inoshanda yekupfeka kodhi: 19.00 inobvumidzwa chaiyo uye yemukati zvipfeko, uye mushure me19.00 - chete manheru madhirezi, sutu kana tuxedo.
MuCorfu, guta guru rechitsuwa cheCorfu, rinoshanda imwe yemakasino ekutanga kuGreece, uye muna 1962 yaive yekutanga kasino kuGreek, ichidzokera kune iro roulette vhiri. Ikozvino iri munzvimbo yekuvaraidza yeCorfu Holiday Palace, uye kusvika nguva dzekupedzisira makumi masere-makumi masere ezana ramakore makumi maviri raive mumuzinda weEmpress Elizabeth weAustria -Hungary, iyo inozivikanwa Princess Sissi. Restaurant yakavhurika kubva 80 kusvika 20 yevashanyi anopfuura makore makumi maviri nematatu.
Iyi casino iri munzvimbo yedondo re Lefkos Pyrgos, iri kuchamhembe-kumadokero chikamu che Xanthi.
Dhizaini yezvivakwa zvine nhurikidzwa mbiri (2200 sqm) zvinoenderana nehukuru hwemiti mirefu inoitenderedza, ichigadzira nzvimbo yakasarudzika inofadza vashanyi kubva panguva yekutanga. MaGreek majee kuti iyi ndiyo yega kasino inoshanda kuhurumende - nekuti vese vakasara vari vega kana vekunze venzvimbo dzekubhejera. Mukasino unogona kutamba American roulette, blackjack, stud poker uye slot michina.
Iyo yekutanga yakavanzika kasino kuGreek Porto Carras iri munzvimbo yeSithonia Hotel Porto Carras, iri dombo chairo reHalkidiki. Iko kune 425 slots michina, roulette matafura 17, 13 blackjack matafura 5 uye poker matafura. Uyezve, pane imba yeVIP yeakakwira roller, mune matafura matatu eblackjack, matafura eroulette 5 uye 1 poker tafura. Iyo yemukati yakanyatsogadzirwa nenzira chaiyo yeNew Orleans, kune snack bar uye bar.
Iyi kasino inoshanda mune imwe hotera, ingori maminetsi gumi kutyaira kubva pakati pePatra. Iyo yakaoma iri pamahombekombe akanaka muRio, mune yakasvibirira magadheni ari pane imwe nzvimbo yemazana matatu emamirimita, pamberi peimba yeVenetian. Casino Rio inopa yakasarudzika tafura mitambo senge blackjack uye roulette, 10 slot michina uye poker mafeni akamirira matafura eTexas Holdem Poker. Vashanyi vanogona kutamba slot michina chero nguva yezuva kana husiku, nekuti ivo kasino yakavhurwa maawa makumi maviri nemana pazuva.
Casino iri mutaundi reSyros Ermoupoli. Iyi kasino nyowani nyowani - yakatanga kushanda chete muna Kubvumbi 1997. Zvisinei, ndiyo yaimbova hotera "Europe", yakavakwa muna 1830. Chivako chakadzoreredzwa neruremekedzo, nhoroondo yake uye zvinhu zveCycladic, uye ikozvino chaicho gem. Casino Syros ine matafura makumi maviri nematanhatu emitambo inozivikanwa kwazvo: roulette, blackjack uye stud poker, pamwe ne26 slot michina.
Regency Mont Parnes Casino Resort iri mutaundi reMont Parnes, chinhambwe chemakiromita gumi nematanhatu chete kubva pakati peAtene. Iyi kasino uye hotera yakaoma iri mune imwe yenzvimbo dzakasarudzika uye dzakanaka nzvimbo dzeAttica basin, ine makore anopfuura makumi mana emakore. Muchokwadi, yaive yekutanga kasino, yakavhurwa kuGreece. Munguva pfupi yapfuura, iyi tata yakatengwa neboka reRegency Varaidzo SA, iyo yakabata dzinoverengeka dzekuvandudza nekugadzirisa, uye yakawedzera kusvika kunharaunda yakazara ye17 square. Parizvino, ndiyo kasino yemhando yepamusoro yenyika. Kune gumi nematanhatu matafura ejackjack, tafura yeroulette 18,000, tafura 16 yePunto Banco uye poker tafura 32, uye anopfuura mazana manomwe slots. Vatengi kasino uye hotera yakaoma inogona zvakare kuzorora uye kunakidzwa nemasevhisi eiyo kirabhu yekusimba Club Olympus. Kunze kwezvo,
Kunyangwe mutemo wechiGreek usingarambidze vanobhejera kuti vawane marezinesi emakasinasi epamhepo anoshanda kuGreece, asi kuzvitonga pamhepo kubheja kune boka reOPAP. Nekudaro, Girisi, vatambi vanogona kushandisa zvakasiyana siyana zvikumbiro zvevashandisi vekunze, vanoisa yako saiti kune vashandisi veGreek. Parizvino, pane 118 online makasino ayo anopa mutambo muChirungu kana chiGreek uye anotambira mitengo mumaeuro kana madhora US.
Muna 2002, hurumende yeGreek yakadzika mutemo unorambidza zvachose marudzi ese emitambo yemagetsi. Nekudaro, izvo zvinopihwa nemutemo uyu zvakapfaviswa neMutemo we2011, uyo unobvumidza kupihwa marezenisi kwevanoshandisa kubheja mitambo yepamhepo. Asi kutaura zvazviri, kuzvitonga kuzere kwekupa mitambo yepamhepo kusvika 2030 muridzi weGreek nyika yekubhejera kambani OPAP. Zvakadaro, muna 2013 Dare reEuropean rakapa mutongo wekuti hutongi hwakapihwa OPAP, haupindirani nemutemo weEuropean Union. Nekudaro, mutemo uri kuGirisi unofanirwa kushandurwa zvinoenderana nezvinodiwa neEuropean Union, Greece inomanikidzwa kuvhura musika wayo kukwikwidza kubva kune mamwe makambani.
Nhoroondo yakafuma yekasino reRhodes
Rhodes Casino inozivikanwa kwazvo uye inonakidza kasino kuGreek. Nguva refu chivakwa chisati chatanga kushanda kasino, pano yakabudirira hotera yakavhurwa asi Chivabvu 24, 1927. Izvi zvakagara huwandu hwevanhu vane mukurumbira kubva kutenderera pasirese, saWinston Churchill, Aristotle Onassis naGeorge Papandreou. Ihotera iyi yakaona zviitiko zvenguva zhinji, senge kusaina kweHurumende yeIsrael yakavambwa muna 1948.
Casino Loutraki inozivikanwa seyakanyanya kugadzikana
Muna 2013, iyo Club Hotel Casino Loutraki yakapihwa Mubairo Wepasi Pose weiyo Foundation for Environmental Dzidzo "Green Kiyi mu2013" nekutora kwake chinzvimbo mukudzivirira kwezvakatipoteredza. Casino yakapihwa kuvandudza chirongwa chezvekuita chekuenderera nekuvandudza nharaunda munzvimbo yavo. Matanho akatorwa anoitirwa kudzikisa kushandiswa kwemvura, kushandiswa kwakanaka kwemarara, zvigadzirwa zvekuchenesa, kuendesa kune vashandi nevashanyi nezve kuchengetedzwa kwenzvimbo yeruzivo.
Nzvimbo yeGreece, uye nhepfenyuro shomanana yemamiriro ezvinhu
Greece haina kusununguka inonzi "chivako chebudiriro yeWestern" - pano makore zviuru zvitatu BC, paive nebudiriro yekutanga pachitsuwa cheKrete, chinonzi Minoan. Pane zvese, nhoroondo yechiGreek inozivikanwa kwatiri kunyangwe kubva kumabhuku echikoro enhoroondo - kuti nyaya nezve polis yeSparta neAthens, iyi gladiator inorwira, uku kusangana kunosiririsa pakati pehushe hweRoma uye kunoenderana nazvo kubva muna 3,000 AD
Chii chinonzi Girisi yanhasi? Iye zvino inzvimbo inozivikanwa. Kubva 1924, Greece yakava republic republic, uye muna 2002 yakava mari yepamutemo ye euro. Greece inoumbwa nematunhu gumi nematatu (matunhu), anosanganisira makumi mashanu neshanu (zvakafanana kumatunhu eRussia). Vanenge 13% yevagari - maOrthodox maKristu, uye zororo raunofarira - Isita.
Casinos uye Kubheja muGreece
Icho chokwadi chekuti Girisi inogamuchira mari hombe kubva mukushanya chakakanganisa maitiro ehurumende kubhejera. Iyo yekutanga kasino yakavhurwa muna 1928 padhuze neLoutraki (ino inzvimbo inozivikanwa kwazvo spa yenyika). Iko kunaka kwemasevhisi akapihwa ndeeye akanyanya mwero wepasi rose, uye kubva kuakasanganiswa emitambo uye kushongedzwa kwekupenya kwehoro dzevashanyi kunotanga mamiriro euphoria.
Kwete isinganyanyo kufarirwa pakati pevashanyi vanofarira kasino muTesaronika, yakanzi «Regency». Iyo ndiyo hombe uye inosanganisira kuwedzera kune iyo yose kasino yakaoma tata e3 smart maresitorendi, mabara, uye kunyangwe yayo yemitambo chivakwa.
Makiromita mashoma kubva kuAthens, kasino «Mont Parnes». Iyo iri paGomo reParnassus, uye iwe unogona kungosvikako chete necable mota. Anoshanda inoyevedza kasino mazuva ese kunze kweChitatu. Iwe unozofanirwa kuve nepasipoti uye woongorora yeKodhi-kodhi - mitambo uye zvipfeko zvisina kujairika hazvigamuchirwe.
Vanoda mafaro uye zviitiko zvekunze zvinokwezva Siroe sarudzo pachitsuwa cheErmoupoli. Pano, kuwedzera kune matatu emhando yepamusoro emakamuri emitambo ari muzvivakwa zvezana ramakore rechi3, unogona kunakidzwa nerwendo rusingakanganwiki muchikepe uye kufamba mune yepasi pevhu gallery.
Ikambani yakakura yakaita sangano rekubheja muGrisi, inonzi kubi.
Mitambo yeIndaneti muGreece
Sezvatakambotaura, nyika hombe monopolist - isangano rakabiwa. Ndiye iye iye parizvino anotonga mugove weshumba wekubhejera online. Remote Gambling Association RGA iyi mamiriro zvinonzwisisika havadi, asi zvemuno nepo vasinganyatsoda kupinza munzvimbo yavo yeEuropean poker makamuri.
Pano unogona kutamba online kasino, asi chete kunzvimbo dzakabvumirwa. Greece inoita mari yese iyoyo haina kuyerera ichibva munyika. Naizvozvo, vanowanzoita kasino vashandisi vanofanirwa kusiya nguva yezororo, asi pane mukana wekuyedza yemuno kuravira uye uchiri kuve ne 100% chokwadi chevimbiso yekubhadharwa kwema winnings.
Atene inowanzozara nemhando dzose dzezvitsva.
Acropolis . Inosanganisira zvivakwa zvina: mukova mukuru (propylene), tembere mukuremekedza patroness weAtene, Parthenon, tembere mukuremekedza Mwarikadzi weKukunda, uye Erechtheum Palace mukuremekedza Poseidon naAthena. Ukuru hwezvivakwa hunonakidza uye hunonakidza, pakuona zvinotora zvinotora kanenge maawa mana kusvika mashanu.
Temberi yaZeus . Nzvimbo: padyo neAcropolis uye Syntagma, iro rakakura guta nzvimbo. Parizvino, iyo yaimbova yakanaka tembere yakaramba iri matongo chete. Asi ini handifanire kutaura zvine hushoma uye hunodiwa pakuona.
Yevana Museum . Kero: Kydathenaeon, gumi nemana; Plaka. Kubva 14 mimhanzi yekunyorwa inofadza vakuru vakaneta nekuona matongo ekare uye zvifananidzo nemakoramu, zvechokwadi, vashanyi vadiki. Iko kunogara kune chimwe chinhu chiri kuitika: ese marudzi ese emusangano, kuratidzira uye kuita.
Museum of the History of Greek Costume . Kero: 7, Dimokritou. Muunganidzwa wemu Museum wevanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvezvipfeko kubva kumatenga ese. Wese munhu anofarira fashoni anonakidzwa nekuona iyo yechiGreek dhizaini yekusimudzira.
Military Museum yeGreece . Kero: migwagwa Vassilissis Sophias Av. uye Rizari, 2. Girisi sezvatinoziva tese inozivikanwa nenyaya dzayo dzechiuto. Pano iwe unogona kuwana zvese zvine chekuita nezve zvechiuto zviitiko, kubva kumakadhi uye mayunifomu kune enhoroondo yunifomu.
Chokwadi chinofadza pamusoro peGreece neGirisi
Chinodiwa chinwiwa -Kofi. Inodhakwa mumarudzi ese emarita, asi iyo tii haina kuremekedzwa.
Zvaunofarira zvokudya zvechiGiriki souvlaki, maduku kebabs pane skewers mutsvuku, kazhinji pork;
Kupfuura mazuva e250 ekupisa kwezuva pagore, pane dzakawanda zvezuva rinowanikwa padenga reimba;
Kuenda kune gungwa hazvina kupfuura 136 km, uye kubva kune imwe nzvimbo munyika;
Nhamba yekurambana kweGreece mapoka anosvika muEuropean Union;
Kuti ave mudzidzisi kana chiremba, asi kazhinji basa rose rebhajhini rakanyanya kwazvo uye rakabhadharwa;
"Ne" chiGiriki che "hongu" wedu;
Kuchikoro, dzidza mitauro ye2, pakati pavo chinyorwa chinotenderwa;
MaGreek anonamata zvakanyanya - zuva rega rega kuchikoro makirasi asati averenga munamato, zororo raunofarira - Isita.
Rhodes ine mukurumbira yekuisa post yemiriyoni butterflies inofudza pano gore rega
Greece pamepu yeEurope
0.1 Rwokutanga ye10 Greek Online Online Casino Sites
2.0.1 Nzvimbo yeGreece, uye nhepfenyuro shomanana yemamiriro ezvinhu
2.1 Casinos uye Kubheja muGreece
2.2 Mitambo yeIndaneti muGreece
2.2.1 Athene dzinofadza
2.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peGreece neGirisi
2.2.3 Greece pamepu yeEurope